Massage pfuti - Ndeapi mabhenefiti ayo ane muviri wedu | Bezzia
Zvese zvakanakira massage pfuti
Susana godoy | 10/01/2022 10:00 | Runako
Iyo massage pfuti yave imwe yemidziyo inoshandiswa zvakanyanya munguva dzekupedzisira. Ichokwadi kuti kare chete vatambi vakuru vaigona kubatsirwa nazvo asi zvino zvinoratidzika kuti zvinhu zvose zvachinja uye nokuda kwemitengo yakachipa chaizvo, tinogona kutove tine imwe mumba medu uye tinobatsirwa nezvose zvakanakira, izvo zvisiri zvishoma.
Unoziva mabhenefiti ayo ose here? Nekuti pane kutaurwa kwekubatsira bvisa tsandanyama aches. Asi ichokwadi kuti ichine zvimwe zvakawanda zvakanaka zvaunofanira kuziva nezvazvo. Nenzira iyi iwe uchaziva kuti ichava shamwari yako itsva kupa muviri wako nyore uye kuwedzera kushanda. Asi ngatiende nhanho nhanho kuti usapotsa chinhu.
1 Zvinonyanya kuderedza kuneta kwemhasuru
2 Inovandudza kutenderera
3 Kubvisa chirwere chisingaperi
4 Bvisa zvibvumirano
5 Inovandudza kufamba kwemuviri
6 Kuwedzera kuzorora muhupenyu hwako
Zvinonyanya kuderedza kuneta kwemhasuru
Imwe yemabhenefiti makuru eiyo massage pfuti ndeye iyo nayo uchati zvakanaka kuneta kuneta. Kana paine kuneta kwemhasuru kana kupera kwefiber, isu tichataura kuti paivewo nekudzidziswa kwakanyanya mushure mayo. Ndicho chikonzero kurwadziwa kunogona kuoneka muviri wose uye saizvozvo pfuti inonyatsoziva kubvisa nayo. Sezvaunochipfuura, uchaona kuti kunzwa ikoko kuchanyangarika sei nokukurumidza zvikuru nokuti kunofarikanya kupora.
Sezvo ari masaja, tinoziva kuti tichava naye activating uye kunatsiridza kutenderera. Chii chinoita kuti muviri wese uwane oxygen sezvaunokodzera. Saka, hazvidikanwi kushandisa simba, asi nemusoro wakakodzera chete, unogona kupfuura nemakumbo uye kukanganwa nezvekuneta mukati mavo, nekuda kwekuvandudzwa uku mukutenderera. Hachizi chikomborero chikuru here?
Kubvisa chirwere chisingaperi
Hwaro hwayo huru isimba rekutaura zvakanaka kumarwadzo. Naizvozvo, hapana chakafanana nekuishandisa kana iripo zvakare zvirwere zvisingaperi zvakadai searthritis. Maari, kurwadziwa uye kuoma ndezvimwe zvezviratidzo zvinowanzoitika. Naizvozvo, kuti udzirerutse, hapana chakafanana nekunyorovesa massage nekukurumidza uye inoshanda seyakapihwa nepfuti yemassage.
Hakusi kurwadza kwetsandanyama chete kunobva mukurovedza muviri ndiko kunonangwa pakurapwa uku. Asi nekuwedzera, zvibvumirano zvakare ndezvekurongeka kwezuva. Nekuda kwekushandisa nguva yakawanda takagara kana nekuda kwekumhanya kwehupenyu hwatinotungamira, zvakajairika kuve nemapfundo muchikamu chemafudzi, cervical kana zvakare munzvimbo yelumbar. Saka, kune vese, kuzunguzika kwakaburitswa nepfuti iyi ndeimwe yeakanakisa marapirwo. Taura zvakanaka kune tension yemhasuru.
Inovandudza kufamba kwemuviri
Kunyange zvazvo zvichida mune dzimwe nzvimbo tisingashiviriri kukwiza zvakanaka, ichokwadi kuti kutaura kwakapararira, pfuti ndiyo imwe yepfungwa dzakanakisisa dzekuita. kunatsiridza kufamba kwemuviri wese. Kubva nekubvisa kusawirirana kwese, tinozoona kuti tine kufamba kwakawanda sei sezvo ichimhanyisa kubatwa kwese zvinovaka muviri kuvandudza matishu. Izvi zvinoguma nekukurumidza kupora.
Kuwedzera kuzorora muhupenyu hwako
Kana takambotaura nezvezvibvumirano, zviri pachena kuti isu tinofanirwa kuenderera mberi tichitaura nezve zvese zvinovaburitsa uye imwe yenyaya dziri pachena ndeyekushushikana. Saka nekuda kwemasaji, mutinhimira wavo uye kumanikidza kunoitwa tichaona kuti muviri uri kusunungurwa sei uye kuzorora kuchauya muhupenyu hwedu. Ehezve, nekuonekana kune izvi zvese, isu tichava nehumwe simba uye rakawanda simba, saka nepfuti yemassage tinogona zvakare kunzwa zvese izvo nekuda kwemisoro yakasiyana inoitirwa mapoka akasiyana emhasuru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Zvese zvakanakira massage pfuti
Nzira Yokuchenesa Nayo Nzeve Dzako Zvakachengeteka
January kutengesa, tora mukana wavo uchiziva!